dhismooyin si sharci daro ah loo lagu burburiyey dagmada xamarweyn ( DAAWO SAWIRADA ) | Somalisan.com Home
dhismooyin si sharci daro ah loo lagu burburiyey dagmada xamarweyn ( DAAWO SAWIRADA )
1/13/2013 2:22:00 P
Ciidamada ayaa gacantooda ku burburinaya sandaqadaha sharci darada lagu dhisay ee laamiga dhexdiisa kuwaasoo horena dhowr mar digiin loogu jeediyay balse badankood dhagaha ka fureysteen digniinta.
Guud ahaan suuqa Xamar weyne ayaa maanta waji cusub yeeshay waxaana uu u ekaaday meel xasarad colaadeed ay ka jirto markii ciidamada Amisom iyo kuwa Soomaalida ay maanta ku dhaqaaqeen bur burinta goobaha ganacsi ee sida sharci darad ah loo dhisay. Ciidamada ayaa gacantooda ku burburinaya sandaqadaha sharci darada lagu dhisay ee laamiga dhexdiisa kuwaasoo horena dhowr mar digiin loogu jeediyay balse badankood dhagaha ka fureysteen digniinta.
Saaka ilaa barqadii maanta waxaa suuqa xamarweyne aad looga dareemay sawaxanka iyo buuqa ka dhashay burburinta goobaha ganacsi ee sida sharci darada ah looga dhistay laamiga qarkiisa.
gudoomiyaha degmada Xamarweyne C/laahi Ibraahin Gardhuub ayaa ka mid ahaa mas’suuliyiintii timid suuqa ee goob jooga ka ahaa howlgalka Burburinta kuwaasoo sheegay in digniin kadib maanta la joogi fulinta amarka Dowlada ee ah in la baneeyo meelaha sandaqadaha laga dhistay ee laamiga qarkiisa ah.